November 9, 2019 - ThutaSone
သားလေး ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန် ပန်းရန် အလုပ်ကနေ အပြေးလေးရောက်လာတဲ့ ဖခင်မေတ္တာ
November 9, 2019 ThutaSone 0
မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေကို အမြဲတမ်းကောင်းစားစေချင်ကြသူတွေဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာမရှိပါဘူး။ သူတို့ဘဝတွေ ဘယ်လိုပဲနေရ စားရ ။ လုပ်ရ ကိုင်ရ ဘဝမှာ ငါ့သားလေး ငါ့သမီးလေးအတွက်ရယ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ လောကဓံနေ့ရက်တွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာလည်း မိဘတွေပါပဲ။ ဒါတွေကိုတော့ ငယ်ဘဝမသိကြပေမယ့်ကိုယ်တိုင် မိဘနေရာရောက်လာချိန်မှာတော့ ကောင်းစွာသိကြမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေကြတော့ သားသမီးတွေဟာ အမေတွေကို ပိုမိုချစ်ခင်ကြပါတယ်။ […]
ငွေချေး စာချုပ်ကို အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ပြောင်း မချုပ်ကြပါနဲ့။ ပြဿနာရှိနိုင်လို့ပါ။ ယနေ့ ရပ်ကွက်ထဲတွင် အဖြစ်များသော ပြသနာတစ်ခုကတော့ ငွေချေးခြင်း နှင့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေလိုအပ်သူက ငွေကြေးတတ်နိုင်သူထံ ချေးသည်။ ( ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ ဟု သုံးရခြင်းမှာ ထိုသူများသည် ငွေတိုးချစား သူများမဟုတ်သည်ကို ဆိုလိုပါသည်။) […]
မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လ အန်ဆန်
ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ မတူညီတဲ့ ဝိတ်တန်း ၂ ခုမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရွှေခါးပတ် တွေရရှိထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ သူ့ထက်ဝိတ်တန်းမြင့်တဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီရာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အနိုင်ယူအပြီးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရ်ှလာခဲ့ပါပြီ ဒီနေ့ လေဆိပ်ကိုဆိုက်ရောက်လာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကို မိသားစုဝင်များက လေဆိပ်မှာလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ မွေးရပ်မြေကို ပြန်လာတဲ့ မြန်မာ့ စပါးအုံး […]
မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို နှာခေါင်းဖြင့် အားမပေးကြဖို့ ပရိသတ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ သာဒီးလူ (ရုပ်သံ)
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို နှာခေါင်းဖြင့် အားမပေးကြဖို့ ပရိသတ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ သာဒီးလူ အဆိုတော်သာဒီးလူက မနေ့ည မြန်မာအိုင်ဒေါ Rock Week ရဲ့ Result Show မှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဧည့်သည်အဆိုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဗုတ်တင် စနစ်တွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီး ဗုတ်အများဆုံးရရှိသူက […]
‌ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူမ်ားအတြက် လက်တြေ့ နည်းလမ်းကောင်း
ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများအတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ။ ခေါင်းတစ်ြ်ခမ်း ကိုက်ပါက ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ဥ၊ တစ်မွှာကို ခွာပြီး ထုထောင်းပါ ပြီးလျင် စက္ကူပါးလေးတွင် […]
ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းနေပါလို့ အကြံပေးလာတဲ့ မိုးဟေကို
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီျးေခာ မိုးဟေကိုက အနုပညာလောကမွာ အျချိန်အေတ်ာကြာ အောင်မြင်မှုတျွေမားစွာ ရရွိနေသူ တဈဦး ဖြဈပါတယ်။ မိုးဟေကိုရဲ့ တည်ငြိမ်လွပတဲ့ အလွပတွေကို ပရိသတ်တွေကလည်း မချစ်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ မိုးဟေကိုက လက်ရွိမွာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း ရုပ်ရွင်ထုတ်လုပ်ရေးတဈခုကိုလည်း အောင်အောင်မြင်မြင် တည်ထောင်ထားတာ ဖြဈပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ […]
ဖွင့်ကြည့််မရလောက်အောင် အိပ်ပိတ်ထားတဲ့ သင်္ကန်း တွေ ၀ယ်မလှူနဲ့နှော်
အိပ်ပိတ်သင်္ကန်း ဘယ်တော့မှ မလှူကြပါနဲ့။ ကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာ ကထိန်ခင်းတာ လှပအောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိပ်ပိတ်သင်္ကန်း အစုံ (၁၀၀)ကျော် ပါလာတယ်တဲ့။ ဖွင့််ဖောက်ကြည့်တဲ့အခါ စုတ်ပြဲနေတဲ့ သင်္ကန်း အဟောင်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ အခြားသော ကျောင်းတိုက်တွေဆီကို သံသရာ မလည်အောင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးက အားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ဲ ဒကာ ဒကာမတွေကို […]
ခရီးသွားမယ့်သူများ ကားမူးတက်ရင် ဖယောင်းတိုင်ဆောင်သွားပါ
ခရီးသွားမယ့်သူများ ကားမူးတက်ရင် ဖယောင်းတိုင်ဆောင်ထားပါ ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ်….. ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမိရင် လူကမူးမော့နေတာတစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ…. ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက […]
ယနေ့နိုဝင်ဘာ (၉) ရက် မုန်တိုင်းအခြေအနေတနာရီမိုင် ၆၀ လေပြင်းတိုက်မည့် ဒေသများ
အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၇:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားအလွန်ကောင်းသောဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း(Very Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် မြောက်ဘက် […]
တစ်လအတွင်း အမာရွတ် ပျောက်ကင်းနည်း (ကိုယ်တွေ့)မို့
.မိမိ ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ထိခိုက်ရှနာဖြစ်လို့ အမာရွတ်ထင်ပါက သနပ်ခါးသွေးသော ကျောက် ပြင်ပေါ်တွင်. ကွမ်းသီးအလုံးကို သနပ်ခါးသွေးသကဲ့သို့ သွေးပေးပြီး အနာရွတ်အပေါ်တွင် ပုံမှန်နေ့ စဉ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ တစ်လအတွင်း အမာရွတ်ဖြစ်သောနေရာသည် လုံးဝသိသာစွာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ယုံကြည်လျင် အမာရွ တ်ပျောက်ချင်လျင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ ကွမ်းသီးအလုံးကို […]
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးထဲ စကားပြောနေဟန်တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်သောအခါ ဇော်ဂျီတစ်ပါးအံ့သြစွာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ထူးခြားသော ခမုံ ဆရာတော်ကြီ
အင်္ဂလန်မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ကိုယ်တိုင်ထုလုပ် ပူဇော်ကိုးကွယ်နေကြပါပြီ
ဒီရက် ပိုင်း ကြက်သား လုံး ဝ မစားကြပါနဲ့ အထူး သတိထားကြပါနော်